Utubaan Manni Oromoon ijaarrachuuf deemuu gadi dhaabbateera. »
Utubaan Manni Oromoon ijaarrachuuf deemuu gadi dhaabbateera.
Sagal Obsinee, takkaa Duullaa !
Sagal of-eeggannee, takkaa haleellaa
Sagal qiyyaafannee , takkaa adda keessa buufnaa !!!
Jabbaadhaa!! Bilisuummaan salphaatti hin argamu. Guyyaan billisummaa Oromoo yeroon isaa fagoo miti. Waaqayyo dhiiga Qeerroo Oromoo lafatti hin gatu.